Etu esi amata onye na-akpọ m ọnụọgụ amaghị | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi amata onye kpọrọ m ọnụọgụ amaghị
Ụlọ Ignatius | | Aplicaciones, Mobiles
Ọtụtụ n’ime anyị bụ ndị ọrụ na-ata ahụhụ site na ekwentị a na-amaghị ama n’oge ụra, ihe mbụ n’ụtụtụ ma ọ bụ obere oge tupu 10 n’abalị. Ihe kpatara ya bu ihe ozo gbalịa ijide onye ọrụ na-enweghị ọrụ inwe ike ịnye gị, n'ozuzu, usoro ọrụ.
Ọ dabara nke ọma, maka nsogbu ndị dị otú ahụ, anyị nwere nhọrọ dị iche iche dị na ngwa nke ngwa, ngwa na-agbakwunye ibe anyị, ka anyị wee nwee ike iji ihe karịrị otu ngwa n'otu oge. Lee, anyị ga-egosi gị kedu ka esi mara onye kpọrọ anyị ọnụọgụ amaghị.
Ndị ọrụ ekwentị, ụlọ ọrụ inshọransị, azụmaahịa n'ụdị niile ... mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịbụ onye nọ n'azụ nọmba ekwentị anyị na-amaghị. Usersfọdụ ndị ọrụ na-ahọrọ ibelata ọnwụ ha mgbe anyị na-amaghị ama anyị amatago ụdị oku a na-agwa onye na-agwa anyị okwu okwu ka ọ ghara ịkpọ anyị ọzọ, ihe dị nwute na anaghị eme na oge na-aga anyị na-enweta oku ọhụrụ.
2 Ezi oku
3 Kpọọ Blocker
4 Onye kpochie
5 Kpọọ ngwa
6 Onye na-akpọ ID Pro
7 Gbochie oku na-enweghị ngwa
7.1 Gbochie nọmba ekwentị na iPhone
7.2 Gbochie nọmba ekwentị na gam akporo
Ọ bụ ezie na amachaghị nke ọma n'ahịa, Hiya bụ otu n'ime zuru ezu na mfe oku na-egosi usoro iji mee nke anyị nwere dị na iOS na gam akporo. Hiya na-enye anyị ohere ịmepụta ma jigide akara ederede nke nọmba ekwentị egbochi ka ọ bụrụ na oge niile ọ na-eme ka ha dị ka spam na oku anaghị ada na ọdụ anyị ma ọ bụ na-atụgharị ya ozugbo na ozi olu.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ ọ bụla kwụsịrị ngwa ahụ, anyị nwere ike ikpesa ya na ngwa ahụ iji nye aka na nchekwa data na ndị ọrụ ndị ọzọ na-erite uru. Ọ na - enye anyị ohere ịchọpụta nọmba ekwentị ọ bụla, ọbụlagodi SMS nke na - esochighị n’uche anyị ma ọ bụ nke yiri ya, site na ịgụta ndị ọzọ nọ na ndekọ aha ngwa ahụ. Ọzọ uru nke a ngwa bụ na ọ na-mmelite fọrọ nke nta kwa ụbọchị mgbe ọ bụla anyị na-emeghe ya, ya mere anyị nwere ọhụrụ nọmba ekwentị ụbọchị ọ bụla.
Hiya: Kpọọ njirimara na igbochi
Hiya: Onye na-akpọ oku & mgbochi spamfree
A na - akpọ True Caller n’ụdị abụọ, nke a kwụrụ ụgwọ na-enyekwa anyị ohere ịdekọ oku ekwentị (naanị na ụdị gam akporo), egosighi mgbasa ozi ma nye anyị ohere ịrịọ njirimara nke nọmba ekwentị 30 amaghi kwa ọnwa. Agbanyeghị, site na ntụgharị a na-akwụghị ụgwọ, anyị nwere ihe karịrị ọtụtụ mmadụ efu ka ana-echekwa, ebe ọ na-enye anyị ohere ịchọpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akara ekwentị ọ bụla na-akpọ anyị.
Ọzọkwa na-enye anyị ohere igbochi spam na-akpọ oku na telemarketing na mgbakwunye na SMS, ma gbochie nọmba ekwentị site na usoro. Ọ na-enyekwa anyị ikpo okwu izi ozi iji soro ndị enyi anyị kparịta ụka, ọrụ na-enweghị isi na ụdị ngwa ndị a. Ọ bụrụ na smartphone anyị nwere SIM abụọ, enweghị nsogbu, ebe ọ bụ na ngwa ahụ na-arụ ọrụ na oku ọ bụla anabatara, ọ bụghị site na isi ma ọ bụ akara nke njedebe.
Truecaller: NJ na oku oku
Truecaller: Iji gbochie spamfree
Ọzọ dị ukwuu ngwa dị na ma android na iOS igbochi spam ekwentị oku bụ Call Blocker, ngwa nke ga-elekọta na-akpaghị aka na-egbochi ma oku ma SMS site na ụlọ ọrụ ndị edebanyere aha na nchekwa data gị. Ọ na-enyekwa anyị ohere ịlele nọmba ekwentị site na nchekwa data ya ma ọ bụ tinye ndị ọhụrụ ma ọ bụrụ na otu n'ime ha jisiri ike ịgafe ntinye ngwa ahụ.
Ngwa a na-enye anyị nọmba ekwentị ma Spain ma Latin America, ya mere ngwa ndị ọzọ enwebeghị ike inyere gị aka, ma eleghị anya, nke a na-eme. N'ime nhọrọ nhazi, Ogwe oku na-enye anyị ohere igbochi nọmba ekwentị ọ bụla na-adịghị na listi ịkpọtụrụ anyị, oku mba ụwa ma ọ bụ oku ndị ahụ anyị nwetara na nọmba zoro ezo.
Kpọọ Blocker - Gbochie ma kpesa ekwentị igwe
Developer: Ekwentị Unknown.com
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ahụ anaghị achọ njikọ internetntanetị A ga-emelitere oge, Whoscall bụ ngwa ị na-achọ. O nwere nchekwa data nke ihe karịrị nde ekwentị ekwentị 600 nke achọpụtapụtara dị ka spam ma ọ bụ telemarketing. Dị ka ngwa ndị ọzọ, ọ na-enye anyị ohere igbochi ụdị oku ọ bụla yana SMS nke ọnụọgụ niile gụnyere na usoro nke ngwa a.
Onye na - ekpuchi - ID & Block
Developer: gogo anya
Onye na - ekpuchi - ID & Blockfree
CallApp abughi nani n’enye anyi ngwa ka inwe ike ngwa ngwa mata nọmba ekwentị e weere na ọ bụ spam ma ọ bụ metụtara telemarketing, ma na-enyekwa anyị ohere ịdekọ oku, iji nwee ule anụ ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya n'oge ọ bụla. Oge ọ bụla anyị natara oku, aha ụlọ ọrụ ọ jikọtara ya ga-egosi na ihuenyo nke ọnụ anyị, nke ga-enyere anyị aka ikpebi ngwa ngwa ma anyị chọrọ ịkpọ oku.
Oku na ndekọ na-enye anyị ohere idekọ ma oku mbata ma oku na mfe ịkekọrịta ha site na ngwa. Ngwa a na - enye anyị ohere ịchekwa nọmba ekwentị nke ndị anyị na - akpọtụrụ site na netwọk mmekọrịta dị iche iche, gbakwunyere nke ahụ ga-ezuru ụfọdụ ịhọrọ ngwa a
N'ihi mgbochi iOS, a ngwa bụ nanị dị n'ime gam akporo ilekota,, ebe enweghi nsogbu mgbe ị na-eji ngwa edekọ oku ekwentị anyị mere ma ọ bụ nata.
Ihe mgbochi CallApp-Call
Onye na-akpọ ID Pro
Anyị na-emezue nchịkọta nke ngwa kacha mma iji gbochie nọmba ekwentị na Caller ID Pro, ngwa nke na-arụ ọrụ n'okpuru ndenye aha ma lekwasị anya na ndị ọrụ chọrọ ịma onye na-akpọ ha mgbe niile. The nchekwa data nke nọmba ekwentị na na-egosi anyị na-emelite kwa ụbọchị.
Banyere ọrụ, Caller ID Pro na-enye anyị ihe dịka ọrụ anyị nwere ike ịchọta na ngwa ọ bụla ọzọ ke ima ineme ke ibuotikọ emi. Ọnụ ego nke ndenye aha sitere na euro 10,49 kwa ọnwa ruo euro 31,99 kwa afọ, ọ bụrụ na anyị akwụ ụgwọ n'afọ niile. Ọ bụrụ na anyị doro anya na nke a bụ ngwa anyị chọrọ, anyị nwere ike ịhọrọ iji ikike nke ndụ niile nwere ọnụahịa nke euro 54,99.
Onye na-akpọ ID Pro naanị maka iOS jikwaa ngwaọrụ, nke ahụ bụ, maka iPhone naanị na naanị. Ugbu a ọ nweghị ụdị dị maka gam akporo.
Onye na-akpọ ID profree
Gbochie oku na-enweghị ngwa
Ọ bụrụ na anyị achọghị iji ụdị ngwa ndị a ma anyị achọghị ịma iburu oku na-adịghị mma anyị natara n'oge na-ekwesịghị ekwesị, anyị nwere ike ịhọrọ ịkpọchi ọnụ ọgụgụ ahụ ozugbo site na ọnụ anyị, ma ọ bụ iPhone ma ọ bụ gam akporo
Gbochie nọmba ekwentị na iPhone
Mbụ anyị na-aga oku na ndekọ.
Ọzọ, anyị pịa na nke ahụ egosiri na njedebe nke nọmba ekwentị anyi choro igbochi.
Na nkọwa nke nọmba ekwentị ahụ anyị hụrụ nhọrọ Gbochie kọntaktị a.
Site na ịpị na nhọrọ, iOS ga-agwa anyị na nma ọ bụ na anyị agaghị enweta oku ma ọ bụ ozi ederede na kọntaktị ahụ.
Gbochie nọmba ekwentị na gam akporo
N'ime oku ndekọ, anyị ga- pịa nọmba ekwentị anyi choro igbochi. Ọ bụrụ na anyị nwere ya na-echekwa na burukwa, pịa aha.
Mgbe ị na-apị, a ga-egosipụta menu ga-enye anyị ohere iji: Zipu ozi, Bmkpọchi / akara dị ka spam na Kpọọ nkọwa. Anyị pịa nhọrọ nke abụọ.
Ọzọ, anyị kwesịrị gosi na anyi choro igbochi onu ogugu a ịkwụsị inata ozi ederede na ịkpọ oku n’ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Etu esi amata onye kpọrọ m ọnụọgụ amaghị